Musharax Madaxweyne Dr. Abdinasir oo ka hadlay dacwadda kiiska badda ee Soomaaliya iyo Kenya - Home somali news leader
Home NEWS Musharax Madaxweyne Dr. Abdinasir oo ka hadlay dacwadda kiiska badda ee Soomaaliya...
Musharax Madaxweyne Dr. Abdinasir oo ka hadlay dacwadda kiiska badda ee Soomaaliya iyo Kenya
War-saxaafadeed uu soo saaray maanta Musharaxa Madaxweynaha Soomaaliya sannadka 2021 Dr. Abdinasir Abdille Mohamed ayuu kaga hadlay kiiska dacwadda badda ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya isagoo sheegay in ay lama taabtaan tahay xuduudda badeed, dhuleed iyo midnimada Soomaaliya.
Musharax Madaxweyne Dr Cabdinaasi Abdille Mohamed ayaa warsaxaafadeedkiisa waxa uu ku sheegay in uu garab taagan yahay qareenada difaacaya badeena.
“ Waxaan garab taagannahay qareennada difaacaya xuduud-badeedka qarankeenna, sidoo kale waxaan ugu baaqeynaa shacabka Soomaaliyeed in ay garab istaagaan oo taageeraan qareennada difaacaya baddeenna.” ayuu yiri Musharax Madaxweyne Dr. Abdinasir.
Sidoo kale wuxuu sheegay in la joogo waqtigii ay shacabka Soomaaliyeed u midoobi lahaayeen qaddiyadda badda oo ay taageeri lahaayeen qareennada kiiska dacwadda gacanta ku haya isagoo sheegay in Soomaaliya ay ku guulaysan doonto.
“ Shacabka Soomaaliyeed waa in ay marwalba feejignaan badan muujiyaan arrinta kiiska badda iyo inay taageero buuxda siiyaan qareennada difaacaya qaddiyaddeenna si loo xaqiijiyo guusha Soomaaliya, Sidoo kale qareennada difaacaya baddeena waxaa looga baahanyahay inay marwalba naga haqabtiraan hadba meesha uu marayo kiiska baddeenna oo ay Shacabka Soomaaliyeed lasoo wadaagaan si joogto ah, waxaan rajaynayaa in xaqu u hiili doono Soomaaliya oo ay ku guulaysan doonto dacwaddaas inshallaah.” ayuu kusoo gabagebeeyey.
Maxkamadda Caddaaladda Adduunka ayaa la filayaa inay qabato 15 bisha Maarso dhegaysiga dacwadda kiiska badda ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya.
Previous articleThe Covid-19 situation in the Paris area is extremely tense, says the French Prime Minister
Next articleGuddoomiyaha Aqalka Sare oo la kulmay safiirka Ingiriiska ee Soomaaliya